Seychelles inomiririrwa paSpotlight Africa semusangano, Lusaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Seychelles inomiririrwa paSpotlight Africa semusangano, Lusaka
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Dhinda Zviziviso • Press zvinoburitswa • Seychelles Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Zimbabwe Breaking News
Seychelles Tourism Board (STB) yakapinda musangano weSpotlight Africa Workshop wakaitirwa muLusaka, Zambia, uyo wakaitwa musi waFebruary 13, 2019, wakarongwa neHouston Travel Marketing Services.
Iyo Spotlight Africa Workshop ipuratifomu yebhizinesi inopa mikana yekumisidzana nevanhu kunze kwekukurudzira kusangana nemabhizimusi.
Chinangwa chekutora STB pamusangano we2019 yaive yekukwezva vatengesi kuti vatarise zvakanyanya kuzvitsuwa zvekunze senzvimbo inodhura asi yakasarudzika mudunhu reAfrica.
Vachitaura nezve kutora nzvimbo kwekuenda kumusangano weSpotlight uyu, Mai Sherin Francis STB Chief Executive vakataura kukosha kwekuwedzera kuoneka kwenzvimbo iri pamisika yese.
“Seboka revashanyi, hatitengesere chigadzirwa; tinotengesa zviroto nendangariro. Kupinda kwedu mumitambo mikuru yekutengeserana kwakakosha asi hatikwanisi kuregeredza mashopu madiki mumisika mitsva sezvo iri nguva yekuti tigadzire matsva nevehukama vane mikana yekutengesa kwatiri kuenda, ”vakadaro Mai Francis.
Aimiririra STB aive Senior Marketing Executive, Mai Natacha Servina, avo vakaona kuti huwandu hwezvibereko hwakagamuchirwa panguva yemusangano hwaive pamusoro pekutarisira.
"Kuedza nekusimbisa kwaive kushandura uye kushandura pfungwa-dzevashanyi vazhinji nekuratidzira divi rinodhura reSeychelles kwandinotenda zvakasimba kuti kutarisisa kunofanira kutorwa kubva uye kuti musika uyu wakakodzera kudyara kuti uwedzere kusimudzira," vakadaro Mai. Servina.
Mumiriri we STB akaonawo kuti Seychelles yaisangova nzvimbo yekukwezva vashanyi vemuno vanobva kuZambia vaive pamusangano uyu.
Akataura kuti paivewo nekufarira kwakaratidzwa nevari kunze kwenyika vanogara muZambia, avo vakashanyira tafura yeSTB, zvichiratidza kuti pane mukana mukuru wekukura pamusika uyu.
STB inowoneka padhuze nevemaindasitiri nyanzvi kusanganisira vekunze vafambi uye vakuru vevashanyi vanoonekwa sevatambi vakuru muZambia Yekufamba Indasitiri.
Mufambisi wemusangano, VaDerek Houston vakataura kugutsikana kwavo nekushama uye kutora chikamu kwakatambirwa gore rino, vachiona kuti The Spotlight on Africa Workshop Lusaka icharamba iri pachirongwa chemuridzi che 2020.